Kuchenesa Pamba Yako IP Address - Semalt
Kune chero ani zvake ari muIndaneti, kuita shanduro ye-e-commerce yepamhizha inogona kubudirira chaizvo izvo zvichaita kuti bhizinesi ribudirire. Kune vakawanda vanoita webmasters, kuwana kuenderera mberi kwekushanya kwevashanyi kune webhusaiti yako ndiyo chikamu chakanaka chekubudirira kwe e-commerce. Nzvimbo dzakasiyana-siyana dzinoshandisa nzira dzakasiyana-siyana dzekutora spam kubva kune mawebsite. Muzviitiko zvizhinji, webhusaiti inoyemura firiji kunze kweGoogle user accounts, iyo inoratidzika ine imwe yezinga rekutumira spam. Nzvimbo dzakawanda dzekutengeserana dzinoshandisa nzira dzavo uye vatengi vachishandisa IP kero. Izvi zvinoreva kuti zvinobvira kutarisa munhu kana kombiyuta yemashandisi nyore nyore achishandisa makiki - outils de planification et gestion du temps.
Jack Miller, Mutungamiriri Mukuru weVatengi Vekubudirira Semalt , anofunga kuti unokwanisa kusimudzira kunyatsoenderana kweGoogle Analytics deta yako nekusaisa mutengesi, unobva kuvashandi vekambani. Zvizhinji zvekushanyira izvi zviri kuedza uye hazvigumisi kutenga kuita kuti data yose isaruramiswe. Vamwe kutumira spam kushanyira kunoitikawo nenzira imwechete iyo inobata mamwe mazita e IP. Zvinogona kuva zvakakosha kushandisa zvimwe zvekufambisa kweGoogle Analytics. Dzimwe nzira dzakawanda dzekuita izvi zvinogona kusanganisira kushandura tsika yekugadzira muGoogle Analytics Admin panel.
Referral spam ishoko rinobva munharaunda yakafanana. Aya emafemu e-spam anowanzo ave nemirayiridzo inowanzoita kuti vanhu vasingatarisirwi vakanganisa kurasikirwa nemashoko anokosha. Ndicho chikonzero kune mafaira anokosha eGoogle Analytics akasikirwa kuti atsungirire dambudziko iri. Aya mafikita anovhara botnet traffic inobva munzvimbo dzemu spamming. Ichi chiyero chinogona kuchengetedza webhusaiti yako kubva kune dzimwe dzese dzinowanzosangana nekupikisa. Semuenzaniso, vatengesi vanogona kuba mashoko ekadhi rechikwereti pamwe chete nedzimwe ruzivo rwakakosha kubva kune vanhu vasingafungi nenzira dzakasiyana-siyana. Imwe yenzira dzakapararira zvikuru dzinoshandiswa nevanopomerwa ne-cyber dzinosanganisira phishing uye kuputika kwenzvimbo.
Kufungisisa IP address yako
Ita yeGoogle Analytics kambani kana kuti tumira mu akaunti yako kuti uchengetedze kero yeP IP kubva pane peji. Chokutanga pane zvose, iwe unofanirwa kunamatira pachigaro chePI chekambani yako. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kushandisa shanduro yemagetsi yemabhizinesi ebhizinesi rako, iyo inogona kugadzirirwa kuE static IP. Kushandisa mitambo yakawanda yeinternet kunogona kuita kuti zvigadzirwa zvifungisise kero ye IP, iyo inogona kuva yakaoma kutarisa. Semuenzaniso, maikirwo anowanikwa paIndaneti kubva kune mobile broadband anogona kuva nekombiki yePI yakasimba. Pakati pezvigadzirwa izvi mafoni efoni uye mahwendefa achishandisa chinyorwa chebasa rekushandisa.
Mujeri remutungamiri, unogona kusarudza tsika yechirongwa. Mune zviitiko izvi, unogona kuisa iyo static IP address ye network iyo waunoda kuisa pane Google Analytics. Somugumisiro, uchawana mazita akasiyana-siyana uye maIndaneti, iyo iwe waungada kubvisa kubva mumugwagwa wako. Aya mazvirongwa aripo apa. Izvo zvinogona zvakare kuchengeta kureva kutumira spam uye motokari yavo vachishandisa ino tsika filter.